MD Farmaajo oo qoray Warqad oo ku saabsan dagaalka Tukaraq | Allbanaadir
MD Farmaajo oo qoray Warqad oo ku saabsan dagaalka Tukaraq
Warar hoose ayaa sheegaya in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu Qaramada Midoobay ka codsaday inay soo kala dhex gasho Maamulada ku dagaalamaya Deegaanka Tukaraq ee Puntland iyo Somaliland.
Sarkaal ka tirsan Madaxtooyada Soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyay in Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu Warqad u diray Golaha Amaanka si wax kaga qabtaan dagaalka oo kusii fidi kara deegaano aad u badan.
Madaxweynaha Maamulka Puntland ayaa u cadeeyay Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo dowladiisa inay ka madax banaan tahay dagaalka ka socda Tukaraq, wuxuuna u sheegay in Puntland ay isdifaaci doonto inta uu qof ka nool yahay.
Dowlada Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii ay u joojin laheyd dagaalka dhiiga badan ku daatay ee Tukaraq, waxaana la sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya uu ka codsaday Muuse Biixi Madaxweynaha Maamulka Somaliland inuu kala hadlo arintan laakiin wuu ka biyo diiday.
Wararkii ugu dambeeyay Madaxtooyada waxay sheegayaan in Dowlada Soomaaliya ay Qaramada Midoobay ka codsaneyso inay soo fara galiso dagaalka, waana xalka kaliya ee labada Maamul hubka ku dhigi karaan.
Qaramada Midoobay waxaa laga yaabaa Wafdi uu hoggaaminayo Keating inay u dirto Tukaraq si ay u kala qaadaan ciidamada, laakiin wali jawaab cad lagama helin UN-ka.